Nezvedu - Protech International Boka Co, Ltd.
Natsiridza Kubatana Kwekambani Uye Vaka Iyo Kambani's Corporate Tsika. Yekutenda Pfupiso, Yegore-yekupedzisira Kurumbidza, Uye Fungidzira Iyo Yemberi!
Protech Yepasi Boka Co, Ltd. inotora zvigadzirwa zvemhando yepamusoro senge musimboti, zvinosanganisira smart indoor uye yekunze mamonitor monitors, akangwara zviridzwa uye metres, uye gore rekubatanidza mapuratifomu, ayo anoteedzana anoshandiswa mukuyera kwemagetsi nemagetsi, zvemukati uye zvekunze imba nharaunda yekutarisa, hutano hwekutarisa chiratidzo uye mamwe minda. Ndiyo yakazara mhinduro mupi. The zvigadzirwa vari aivigirwa kunyika dzinopfuura zana uye kumatunhu akadai Europe, America uye Southeast Asia. Vakuru vekudyidzana nedzimwe nyika ndiLoyoy Merlin, Foucault uye mamwe mabrands epasi rose, uye China inoshanda pamwe naXiaomi, Huawei nemamwe mapuratifomu.
Protech International Group Co, Ltd ine hofisi yakabatana uye fekitori, inovhara nzvimbo yemamirimita 1,500. Iyo iri muNanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, munzvimbo yepakati yeShenzhen. Inogona kubatanidza epamba uye vekunze vatengi mune pfupi pfupi. Zvinongotora maminetsi makumi mana kuti vatengi vasvike kukero yekambani kubva kunhandare.
Protech International Group Co, Ltd inotora zvigadzirwa zvemhando yepamusoro senge musimboti, kusanganisira smart indoor uye yekunze mamonitor monitors, smart zviridzwa uye metres, uye gore rekubatanidza mapuratifomu, ayo anoteedzana anoshandiswa mukuyera kwemagetsi nemagetsi, kwemukati nekunze imba mamiriro ekuongorora, kuongorora kwehutano zviratidzo uye mimwe minda. Ndiyo yakazara mhinduro mupi. The zvigadzirwa vari aivigirwa kunyika dzinopfuura zana uye kumatunhu akadai Europe, America uye Southeast Asia. Vakuru vekudyidzana nedzimwe nyika ndiLoyoy Merlin, Foucault uye mamwe mabrands epasi rose, uye China inoshanda pamwe naXiaomi, Huawei nemamwe mapuratifomu.